အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရေးစွမ်းရည် အရေးပါပုံ - Myanmar Network
Posted by Language Republic on July 17, 2014 at 11:58 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Online ကပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) သမရိုးကျ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနည်းများကပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်နှင့်ငွေ တော်တော်လေး အကုန်အကျခံပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို လူတွေသင်ယူကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲက အများစုဟာ လုပ်ငန်းခွင် နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်မှာ ထူးချွန်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားက လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြပါဘူး။
US နှင့် England တို့လို အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ စာမတတ်တဲ့သူတွေကတောင်မှ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရရှိနိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံးအလုပ်ကတော့ call centre က ၀န်ထမ်း (သို့) အရောင်းကောင်တာစာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Call centre အလုပ် အများစုမှာ တောင်မှ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ computer ထဲမှာ မှတ်စုတွေကို တခြားသူ နားလည်နိုင်အောင်ရေးပြီး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းထဲမှာ အမြင့်ကိုတက်လှမ်းလေလေ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား စွမ်းရည်က ပိုပိုအရေးပါလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်သူမဆို ကောင်းမွန်သော အရေးစွမ်းရည်များက လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတက်စေမှာ အသေအချာပါ။
အရေးအသားစွမ်းရည် ဟာ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းရေးသားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ customer များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များရဲ့ အဓိကကျတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ customer တွေဟာ စာအရေးအသားနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်တွေကိုပဲ ပိုပြီး နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက် အရောင်းလုပ်ငန်းမှာ အရေးအသားကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ရေးသားတဲ့အခါတောင်မှ သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တတို့ကို ပေါ်လွင်စေမယ့် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ကျကျနနရေးသားတဲ့ အရေးအသားတွေကသာလျှင် အလုပ် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူသူရဲ့စိတ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (သမရိုးကျ) အများစုကတော့ သင်တန်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးစွမ်းရည်တိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းထက် အပြောစွမ်းရည်ကိုပဲ အလေးထားကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မွှတ်နေအောင် ပြော တတ်ချင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူဟာ အရင်ဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ် တယ်ဆိုတာကို သိသင့်ပါတယ်။ သင့်အရေးအသား တိုးတက်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အပြောစွမ်းရည် တွေကလည်း အလိုအလျောက်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားနိုင်ဖို့ဆိုရင် သဒ္ဒါ၊ ဝေါဟာရနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ ရှိထား ရပါမယ်။ ကျွမ်းကျင်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စာအရေးအသားသည် စာဖတ်သူထံ စာရေးသူရဲ့အတွေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားဟာ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု မရှိစေဘဲ စိတ်ကူးတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သော စာအရေးအသားက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ စိတ် အစရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြနေပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားနိုင်ခြင်းက သင့်ကို ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောသူတစ်ယောက်အဖြစ် ရှိစေပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ သူ ဘာကိုပြောချင်တာလည်းဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာ သိနေမှသာလျှင် စာကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာ ရေးသား ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားသည် သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်မှုနည်းစံနစ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခြင်းနှင့် စံနစ်တကျ စုစည်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် သင့်အနေဖြင့် အပြောဘက်မှာလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာပါတယ်။
အယူအဆများ၊ ဗဟုသုတများ၊ အနာဂတ်အတွက် မဟာဗျူဟာများ အစရှိတာတွေကို တင်ဆက်မှု အနေနဲ့ တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားဟာ ပဓာနကျပါတယ်။ သင်ဟာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုပါတော့။ သင့်ကို စီမံကိန်းတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ပုံချဉ်းကပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (သို့) အစီရင်ခံစာကို တင်ခိုင်းပါက သင့်ရဲ့ အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုကသာ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမှုကို ရရှိစေနိုင်မယ့် အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအရေးအသားမှာ အတွေး အခေါ်တိကျမှုနဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဟာ အရေးကြီးကြောင်းပြန်ပြောပါရစေ။ စာရေးသားရာတွင် အချိန်လုံလုံလောက်လောက် ရရှိတဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံအရည်အသွေး တွေကလည်း မြင့်မားပါတယ်။ သင့်မှာ စကားပြောတဲ့အခါ ဆွံ့ခြင်း၊ ထစ်ခြင်းသာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားစွမ်းရည် အားလုံးနီးပါးဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအပြော စွမ်းရည်အဖြစ်ကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Selfgrowth.com မှ P Rama Krishna ၏ Why Focusing on English Writing Skills Is More Important Than Spoken English? ကို ကိုးကား ဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Online ကပဲဖွဈဖွဈ (သို့) သမရိုးကြ အင်ျဂလိပျစာသငျကွားနညျးမြားကပဲဖွဈဖွဈ အခြိနျနှငျ့ငှေ တျောတျောလေး အကုနျအကခြံပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောကို လူတှသေငျယူကွပါတယျ။ အဲဒီလူတှထေဲက အမြားစုဟာ လုပျငနျးခှငျ နှငျ့ ကြှမျးကငျြမှုနယျပယျမှာ ထူးခြှနျဖို့ဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားက လိုအပျတယျဆိုတာကို နားမလညျကွပါဘူး။
US နှငျ့ England တို့လို အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့ တိုငျးပွညျတှမှော စာမတတျတဲ့သူတှကေတောငျမှ အင်ျဂလိပျ စကားကို ကောငျးကောငျးပွောတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ရရှိနိုငျတဲ့ အမွငျ့ဆုံးအလုပျကတော့ call centre က ၀နျထမျး (သို့) အရောငျးကောငျတာစာရေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ Call centre အလုပျ အမြားစုမှာ တောငျမှ ၀နျထမျးတဈယောကျဟာ computer ထဲမှာ မှတျစုတှကေို တခွားသူ နားလညျနိုငျအောငျရေးပွီး မှတျတမျးတငျနိုငျရပါတယျ။ လုပျငနျးထဲမှာ အမွငျ့ကိုတကျလှမျးလလေေ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသား စှမျးရညျက ပိုပိုအရေးပါလာလေ ဖွဈပါတယျ။ မညျသညျ့ လုပျငနျးလုပျသူမဆို ကောငျးမှနျသော အရေးစှမျးရညျမြားက လုပျငနျး ကြှမျးကငျြမှုကို တိုးတကျစမှော အသအေခြာပါ။
အရေးအသားစှမျးရညျ ဟာ ကိုယျရေးရာဇ၀ငျအကဉျြးရေးသားခွငျး၊ ကုနျပစ်စညျးနဲ့ပတျသကျလို့ customer မြားနှငျ့ ဆကျသှယျခွငျး၊ customer မြားနှငျ့ ဆကျဆံရေးကို ခိုငျမွဲအောငျပွုလုပျခွငျး အစရှိတဲ့ လုပျဆောငျခကျြမြားရဲ့ အဓိကကတြဲ့ ကဏ်ဏ္ဍတဈခုဖွဈပါတယျ။ အရေးပါတဲ့ customer တှဟော စာအရေးအသားနဲ့ ဖျောပွထားတဲ့ အကွောငျးအရာ၊ အခကျြအလကျတှကေိုပဲ ပိုပွီး နှဈသကျကွတဲ့အတှကျ အရောငျးလုပျငနျးမှာ အရေးအသားကြှမျးကငျြဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျရေးအကဉျြး ရေးသားတဲ့အခါတောငျမှ သငျ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံ၊ အရညျအခငျြးနှငျ့ အကငျြ့စာရိတ်တတို့ကို ပျေါလှငျစမေယျ့ ရှငျးလငျးပွတျသားပွီး ကကြနြနရေးသားတဲ့ အရေးအသားတှကေသာလြှငျ အလုပျ လြှောကျလှာ ချေါယူသူရဲ့စိတျကို ယုံကွညျမှုရှိစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလိပျစာသငျတနျး (သမရိုးကြ) အမြားစုကတော့ သငျတနျးသားတဈယောကျရဲ့ အရေးစှမျးရညျတိုးတကျလာအောငျ လကေ့ငျြ့ သငျကွားပေးခွငျးထကျ အပွောစှမျးရညျကိုပဲ အလေးထားကွပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစကားကို မှတျနအေောငျ ပွော တတျခငျြသူတဈယောကျအနနေဲ့ သူဟာ အရငျဦးဆုံးအင်ျဂလိပျစာအရေးအသားကို ပိုငျနိုငျကြှမျးကငျြဖို့ လိုအပျ တယျဆိုတာကို သိသငျ့ပါတယျ။ သငျ့အရေးအသား တိုးတကျကြှမျးကငျြလာတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့ အပွောစှမျးရညျ တှကေလညျး အလိုအလြောကျတိုးတကျလာမှာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျလို ရေးသားနိုငျဖို့ဆိုရငျ သဒ်ဒါ၊ ဝေါဟာရနှငျ့ ဖှဲ့စညျးပုံတို့နှငျ့ ပတျသကျတဲ့ အသိပညာ ရှိထား ရပါမယျ။ ကြှမျးကငျြစှာဖှဲ့စညျးထားတဲ့ စာအရေးအသားသညျ စာဖတျသူထံ စာရေးသူရဲ့အတှေးကို ထိထိ ရောကျရောကျ ပို့ဆောငျပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ထိရောကျတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားဟာ စိတျရှုပျထှေးမှု မရှိစဘေဲ စိတျကူးတှေ၊ ခံစားခကျြတှနေဲ့ ထငျမွငျခကျြတှကေို အလှယျတကူနဲ့ ထိုးဖောကျသိမွငျနိုငျစမှော ဖွဈပါတယျ။ ကြှမျးကငျြသော စာအရေးအသားက ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှု၊ ရှငျးလငျးပွတျသားတဲ့ အတှေးအချေါ၊ ခှဲခွမျးစိတျဖွာတတျတဲ့ စိတျ အစရှိတဲ့ ကောငျးတဲ့စရိုကျတှကေို ထငျဟပျဖျောပွနပေါတယျ။ မှနျမှနျကနျကနျရေးသားနိုငျခွငျးက သငျ့ကို ဉာဏျရညျထကျမွကျပွီး ကြှမျးကငျြသောသူတဈယောကျအဖွဈ ရှိစပေါတယျ။ တဈဦးတဈယောကျဟာ သူ ဘာကိုပွောခငျြတာလညျးဆိုတာကို စိတျထဲမှာ ရှငျးလငျး ပွတျသားစှာ သိနမှေသာလြှငျ စာကို ထိထိရောကျရောကျ ရေးသားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ထိရောကျစှာ ရေးသား ထားတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားသညျ သငျ့ရဲ့ တှေးချေါမှုနညျးစံနဈကို ပွုပွငျမှမျးမံပေးခွငျးနှငျ့ စံနဈတကြ စုစညျးပေးခွငျးတို့ကို ပွုလုပျပေးတဲ့အတှကျ သငျ့အနဖွေငျ့ အပွောဘကျမှာလညျး ပိုမိုတိုးတကျလာပါတယျ။
အယူအဆမြား၊ ဗဟုသုတမြား၊ အနာဂတျအတှကျ မဟာဗြူဟာမြား အစရှိတာတှကေို တငျဆကျမှု အနနေဲ့ တငျပွတဲ့အခါမှာလညျး အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားဟာ ပဓာနကပြါတယျ။ သငျဟာ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဆိုပါတော့။ သငျ့ကို စီမံကိနျးတဈခုကို ခဉျြးကပျပုံခဉျြးကပျနညျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျခကျြ (သို့) အစီရငျခံစာကို တငျခိုငျးပါက သငျ့ရဲ့ အရေးအသားကြှမျးကငျြမှုကသာ အထကျလူကွီးတှရေဲ့ ယုံကွညျ ကိုးစားမှုကို ရရှိစနေိုငျမယျ့ အစီရငျခံစာကို တငျပွပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စာအရေးအသားမှာ အတှေး အချေါတိကမြှုနဲ့ ရှငျးလငျးပွတျသားမှုဟာ အရေးကွီးကွောငျးပွနျပွောပါရစေ။ စာရေးသားရာတှငျ အခြိနျလုံလုံလောကျလောကျ ရရှိတဲ့အတှကျ သတျမှတျထားတဲ့ စံအရညျအသှေး တှကေလညျး မွငျ့မားပါတယျ။ သငျ့မှာ စကားပွောတဲ့အခါ ဆှံ့ခွငျး၊ ထဈခွငျးသာ မရှိဘူးဆိုရငျတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားစှမျးရညျ အားလုံးနီးပါးဟာ ကြှမျးကငျြတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအပွော စှမျးရညျအဖွဈကို အလိုအလြောကျ ပွောငျးလဲသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Selfgrowth.com မှ P Rama Krishna ၏ Why Focusing on English Writing Skills Is More Important Than Spoken English? ကို ကိုးကား ဘာသာပွနျဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ။
အားပေးစကားပြောကြားခြင်း (Cheering someone up)
ဥပဒေသုံးဆိုတဲ့ သပွတ်အူ အသုံးအနှုန်းများ (Lamentable Legalese by Tom ...
Like us on Facebook - https://www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar
Follow us on Twitter - https://twitter.com/bmBritish
Permalink Reply by MG KO KO on July 17, 2014 at 14:59
စာအရေးအသားဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အရေးချည် တတ်ပြီး တကယ့် အသံနဲ့ မရင်းနှီးသူတယောက်ဟာ ဘယ်လိုမှ စကားပြောကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မွေးကတည်းက ဘယ်သူမှ ဖေဖေ ၊ မေမေ ဆိုတာကို စာရေးပြီးသင်တာ မတွေ့ဘူးပါ။
အရေးအသားကျွမ်းသူတယောက်ဆိုပါစို့ MRT4 မှာ နေပူတော်က တိရစ္ဆာန် အကြောင်း အသံလွှင့်တာ ကျားသစ် Leopard လီယိုပတ် လို့ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် အသံထွက်သွားတာ သူတို့ကိုယ်စားရှက်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့တော့။ အသံမကြားဖူးပဲ အရေးမှာ ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျွမ်း စကားပြောရာမှာ ဆရာတဆူဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မထင်။ ပြီးတော့ အများကြီးပါ.........Lyrics (လိုင်းရွစ်စ်) တဲ့ .... ပြောစရာတွေတော့ အများကြီးပါ......ဆရာတို့တတွေ ပိုသိမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ သင်လိုက်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး သူငယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ်ထိ ၊ ခုထိတော့ စာစီစာကုန်း အလွတ်ကျက်တုန်းပါပဲ.....များများကြီးတော့ လွဲနေတယ်.... ဒီလွဲတာကြီးတော့ ကောင်းတယ်လို့ မပြောချင်တော့ဘူးဗျာ......
Permalink Reply by K Lwin on February 2, 2015 at 22:24
Bro ထောက်ပြတဲ့ အချက်လေးကလည်း သဘောကျစရာပါပဲ.... Bro ရဲ့  comment ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တွေးမိလိုက်တာက writing ရော... speaking ပါ 50/50 ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာလေးကို ကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်....